एमाले, माके र नयाँ शक्तिको एकता प्रतिगमन, पश्चगमन र पुँजीवादतिरको उल्टो क्रमभङ्ग : विप्लव – Janaganatantrik
एमाले, माके र नयाँ शक्तिको एकता प्रतिगमन, पश्चगमन र पुँजीवादतिरको उल्टो क्रमभङ्ग : विप्लव
October 5, 2017 Jhanak Shrestha
बाबुराम र प्रचण्डले मालेमावाद, क्रान्ति, वैज्ञानिक समाजवाद छोडिसकेपछि मान्छेहरुलाई आकस्मिकता लागे पनि यो उनको कर्मले पुर्याउनु पर्ने अनिवार्य परिणाम थियो । उनीहरु पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था मान्ने कुनै न कुनै शक्तिमा विलय या पतन हुन अनिवार्य थियो । मिति हिजो हुनु आकस्मिक जस्तो लागे पनि यो अनिवार्य नै थियो ।
यो प्रतिगमन, पश्चगमन र पुँजीवादतिरको उल्टो क्रमभङ्ग हो । निरन्तरतामाथि दुई वटा क्रमभङ्ग हुन्छन् ।
प्रचण्डले भनेको “निरन्तरको क्रमभङ्ग” पनि अग्रगमन र क्रान्तितिरको क्रमभङ होइन । यो प्रतिगमन, पश्चगमन र पुँजीवादतिरको उल्टो क्रमभङ्ग हो । निरन्तरतामाथि दुई वटा क्रमभङ्ग हुन्छन् । समाज र राज्यलाई वैज्ञानिक समाजवादतिर लैजाने क्रान्तिकारी क्रमभङ्ग र पुँजीवाद, संसदवादतिर लैजाने क्रमभङ्ग । प्रचण्डको क्रमभङ्ग माओवादी आन्दोलनलाई संशोधनवादमा र समाजवादलाई पुँजीवादमा पतन गराउने क्रमभङ्ग हो ।
एक, मालेमावादीको कोणबाट हेर्दा यो गठजोड बाबुरामले भने जस्तो “आवश्यकता र आकस्मिकता”को परिणाम होइन कि “संयोग र अनिवार्यता”को परिणाम हो । बाबुराम र प्रचण्डले मालेमावाद, क्रान्ति, वैज्ञानिक समाजवाद छोडिसकेपछि मान्छेहरुलाई आकस्मिकता लागे पनि यो उनको कर्मले पुर्याउनु पर्ने अनिवार्य परिणाम थियो । उनीहरु पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था मान्ने कुनै न कुनै शक्तिमा विलय या पतन हुन अनिवार्य थियो । मिति हिजो हुनु आकस्मिक जस्तो लागे पनि यो अनिवार्य नै थियो । त्यसैगरि प्रचण्डले भनेको “निरन्तरको क्रमभङ्ग” पनि अग्रगमन र क्रान्तितिरको क्रान्तिकारी क्रमभङ होइन । यो प्रतिगमन, पश्चगमन र पुँजीवादतिरको उल्टो क्रमभङ्ग हो । निरन्तरतामाथि दुई वटा क्रमभङ्ग हुन्छन् ।
उनीहरुको यो गठजोड अस्तित्व संकटमोचनको परिणाम पनि हो । राजनीतिमा एउटै विचार भइसकेपछि फरक पार्टीको रुपमा लामो समय अस्तित्वमा रहन संभव हुँदैन । उनीहरुमध्ये एक समाप्त हुनुपर्छ भने एक हावि हुन्छ । अहिलेको चुनावसम्म पुग्दा प्रचण्ड—बाबुरामको संकट एमालेको भन्दा चर्को देखियो ।
समाज र राज्यलाई वैज्ञानिक समाजवादतिर लैजाने क्रान्तिकारी क्रमभङ्ग र पुँजीवाद, संसदवादतिर लैजाने क्रमभङ्ग । प्रचण्डको क्रमभङ्ग माओवादी आन्दोलनलाई संशोधनवादमा र समाजवादलाई पुँजीवादमा पतन गराउने क्रमभङ्ग हो । यो पनि अनिवार्य नै थियो । केपी वलीले भनेको “जनचाहना, अपेक्षा र आवश्यकता” भने आफ्नो संशोधनवादी, संसदवादी दृष्टिकोणअनुसारका मान्छेहरुको चाहना, अपेक्षा र आवश्यकता ठिकै हो । उनले त्यहाँ लोकतन्त्रको पनि खुव व्याख्या गरेर त्यसैमा सहमति भएको प्रश्नमा जोड्दिए । तर उनले भने जस्तो नेपाली श्रमिक जनता, उत्पीडित वर्ग, समुदायको चाहना, अपेक्षा र आवश्यकता त्यो होइन । श्रमिक जनताको चाहना त झापा विद्रोहदेखि जनयुद्धसम्मको समर्थन, बलिदान हेर्दा नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवाद हो । केपीले भनेको चाहना संसदवादीहरुको चाहना, यो सत्ताबाट मोजमस्ति प्राप्त गरेको वर्गको चाहना भने हो । उनको मानसिकता र दम हेर्दा पनि उनको विचार, नीति र नेतृत्व नै केन्द्रमा भएको प्रष्ट देखिन्थ्यो ।
हाम्रो विचार यो गठजोड विचार मिलेपछिको संगठनात्मक परिणाम हो । एमाले पहिलेदेखिनै संशोधनवादी, संसदवादी, सुधारवादी प्रचण्ड—बाबुरामको भाषामा प्रतिक्रियावादी विचार बोकेको शक्ति थियो । उसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विचलनतिर पुर्याएको थियो । प्रचण्ड र बाबुरामले जनयुद्धको महानतालाई आफ्नो उन्नतीको साधन बनाएर अन्ततः संशोधनवादी, आत्मसमर्पणवादी, विसर्जनवादी बाटो लिन पुगे । एमाले बरु कैयौं मामिलामा स्थिर देखियो तर यी नयाँ संशोधनवादीहरु हावाको दिशाअनुसार कुनै सिमा नराखेर घरि टाउकोले घरी ‘। ले टेक्न पुगिरहेका थिए । उनीहरुको प्रवृत्तिले एउटा केन्द्र खोजिरहेको थियो त्यो काग्रेस, एमाले जो पनि हुन सक्थ्यो । आज एमाले भएको छ । विचारमा एमाले भन्दा कतै फरक नभएपछि संगठनमा एक हुन खोज्नु स्वभाविक परिणाम हो ।
प्रचण्डहरुले नयाँ तरिकाले क्रान्ति गर्ने भन्दै निकै भ्रममा पारेको स्थिति थियो । एमालेसँग विलिन भइसकेपछि यो भ्रम दिने ठाउँ रहने छैन । संसदवादी संसदवादतिर , क्रान्तिकारी क्रान्तितिर हुन सजिलो हुनेछ । जनतालाई पनि यो सच्चाई बुझ्न सरल हुनेछ ।
मुक्ति र स्वाधिनताको आन्दोलनमा बाधा पैदा गर्नेछ । तसर्थ सबै क्रान्तिकारीहरुले यो गठजोड विरुद्ध विद्रोह गरेर क्रान्तिकारी धु्रविकरणलाई सशक्त र सुदृढ गर्नु पर्छ ।
तेस्रो कुरा यसले क्रान्तिकारीहरुलाई दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध क्रान्ति अगाडि बढाउन र वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प छैन भन्ने बुझाउन सहज हुनेछ । किन कि प्रचण्डहरुले नयाँ तरिकाले क्रान्ति गर्ने भन्दै निकै भ्रममा पारेको स्थिति थियो । एमालेसँग विलिन भइसकेपछि यो भ्रम दिने ठाउँ रहने छैन । संसदवादी संसदवादतिर , क्रान्तिकारी क्रान्तितिर हुन सजिलो हुनेछ । जनतालाई पनि यो सच्चाई बुझ्न सरल हुनेछ । मान्छेहरुलाई लाग्न सक्छ ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलेपछि राम्रो परिणाम आउला रु यसले जनता र राष्ट्रलाई के फाइदा हुन्छ १ रु यसको छोटो जवाफ हुन्छ– क्रान्तिकारीहरु, श्रमिक वर्गहरु, वैज्ञानिक समाजवादीहरु मिल्नु राम्रो हो । त्यसले जनताको पक्षमा सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ तर अवसरवादीहरु, पश्चगामीहरु, यथास्थितिवादीहरु मिलेर श्रमिक वर्ग र राष्ट्रको पक्षमा राम्रो परिणाम आएको या राम्रो भएको एउटा पनि इतिहास छैन ।
रुसी खु्रश्चोभ र गोर्वचोभहरु मिलेर सोभियत संघलाई कहाँ पुर्याए ? जर्मनीमा सिदेमान र पँजीवादी मिलेर जर्मन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वंस्त गरे ? नेपाल मै एमाले बनेपछि क्रान्ति गर्न कति गाह्रो भयो ? प्रचण्ड, नारायणकाजी, बाबुराम मिल्दा माओवादी क्रान्ति कसरी विसर्जन भयो ? यी सबै दृस्टान्तहरुले सावित गर्छन् कि यो एमाले, माके, नयाँ शक्ति भन्नेहरुको गठजोडले पनि श्रमिक वर्ग, क्रान्ति, वैज्ञानिक समाजवाद र देशलाई कुनै फाइदा दिने छैन । बरु मुक्ति र स्वाधिनताको आन्दोलनमा बाधा पैदा गर्नेछ । तसर्थ सबै क्रान्तिकारीहरुले यो गठजोड विरुद्ध विद्रोह गरेर क्रान्तिकारी धु्रविकरणलाई सशक्त र सुदृढ गर्नु पर्छ । यो नै सच्चा मालेमावादीहरुको विशिष्ट कार्यभार हो । स्रोत: ईरातो खबर डटकम
← भव्यताका साथ ६८ औँ राष्ट्रिय दिवस मनाउदैँ चीन
कारवाहीमा परे कोसी ब्युरो इञ्चार्ज नविन →